सञ्चारसेट बोकेर ठगी गर्ने नक्कली सुरक्षाकर्मी पक्राउ - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
प्रकाशित : बिहिबार, असोज २९, २०७७१९:५७ पब्लिक आवाज /संवाददाता
एक व्यक्तिले विगत दुई वर्षदेखि नक्कली सुरक्षाकर्मी बनेर व्यवसायीलाई छक्याउँदै आए, तर कसैले पत्तो पाउन सकेनन् । उसले प्रहरीले बोक्ने जस्तै सञ्चार सेट (वाकीटकी) र सुरक्षा निकायको पोशाकसमेत प्रयोग गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवसायीलाई प्रभाव पार्दै कतिपयबाट रकम समेत लिएको जनाइएको छ । अन्तत दुई वर्ष पछि आज महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई पक्राउ गरेपछि रहस्य खुलेको हो । उनी नक्कली सुरक्षाकर्मी बनेर व्यवसायीलाई छक्याउँदै हिँड्ने व्यक्ति भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
२८ बर्षीय छोराद्वारा खुकुरी प्रहार गरी आफ्नै बावुको हत्या !
न्युजिल्याण्डको मस्जिदमा अज्ञात समूहद्वारा अन्धधुन्द गोली प्रहार, २७ भन्दा बढीको मृत्यु !
बलेरो जीपसहित काठ तस्करी गर्ने दुई जना पक्राउ